2013 - ညမင်းသားကိုကို
Sunday, 17 November 2013 | 1comments
Posted by Nya Min Thar at 18:49 1 comments
ဆရာဝန်ကြီး ညာစားတယ် (၃ )
Thursday, 14 November 2013 |0comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ ဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ Skip Ad ကျော်တဲ့အထိတော့ ကလစ်တစ်ချက်စီ နှိပ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက် ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 20:290comments
Posted by Nya Min Thar at 11:270comments
Wednesday, 13 November 2013 | 1comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ ဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ ကျေးဇူးပြု၍ ကလစ်တစ်ချက်တော့ နှိပ်ပေးသွားပါဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက်
Posted by Nya Min Thar at 12:50 1 comments
Posted by Nya Min Thar at 12:230comments
Monday, 11 November 2013 |0comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ ဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ ကလစ်တစ်ချက်တော့ နှိပ်ပေးသွားဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက်
Posted by Nya Min Thar at 12:030comments
Posted by Nya Min Thar at 11:430comments
Posted by Nya Min Thar at 11:150comments
Sunday,3November 2013 | 3comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ ဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ခေါက်ရောက်တိုင်း ဒေါင်းရန်လင့်ကို ကလစ်တစ်ချက်စီ မဖြစ်မနေ နှိပ်ပေးသွားပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက်ပါတယ်ဗျာ. ကျေးဇူးတင်လျှက် ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 18:513comments
Posted by Nya Min Thar at 10:430comments
Labels: Massage, အနောက်တိုင်း
Saturday,2November 2013 |0comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ.. မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ ဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ခေါက်ရောက်တိုင်း ဒေါင်းရန်လင့်ကို ကလစ်တစ်ချက်စီ မဖြစ်မနေ နှိပ်ပေးသွားပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက်ပါတယ်ဗျာ. ကျေးဇူးတင်လျှက် ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 18:570comments
Posted by Nya Min Thar at 12:500comments
Posted by Nya Min Thar at 12:260comments
Friday, 1 November 2013 |0comments
Posted by Nya Min Thar at 21:560comments
ဒီကားလေးက ကြာတော့ကြာပြီ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ... မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ ဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ခေါက်ရောက်တိုင်း ဒေါင်းရန်လင့်ကို ကလစ်တစ်ချက်စီ မဖြစ်မနေ နှိပ်ပေးသွားပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက်ပါတယ်ဗျာ. ကျေးဇူးတင်လျှက် ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 21:230comments
Posted by Nya Min Thar at 20:470comments
Labels: မိန်းမလိင်တူ, အနောက်တိုင်း
The WOLVERINE ရုပ်ရှင်
Posted by Nya Min Thar at 11:480comments
Posted by Nya Min Thar at 13:170comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. ဒေါင်းသည်ဖြစ်မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ခါရောက်တိုင်း ကလစ်တစ်ချက်တော့ နှိပ်ပေးသွားပါ လို့မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက်.. ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 01:400comments
Tuesday, 29 October 2013 |0comments
Posted by Nya Min Thar at 23:590comments
စားရကံကြုံတော့ တန်းတွေ့တာပဲ :P
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. ဒေါင်းသည်ဖြစ်မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ခါရောက်တိုင်း ကလစ်တစ်ချက်တော့ နှိပ်ပေးသွားပါ လို့မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက်..ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 22:260comments
မြန်မာဆိုတာ သေချာတယ် ပုဆိုးကြီးနဲ့
Posted by Nya Min Thar at 10:250comments
Monday, 28 October 2013 |0comments
Posted by Nya Min Thar at 18:330comments
ဟိုတယ်မှာ ခိုးစားတဲ့ မလေးအတွဲ
Sunday, 27 October 2013 |0comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ .. မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. ဒေါင်းသည်ဖြစ်မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ခါရောက်တိုင်း ကလစ်တစ်ချက်တော့ နှိပ်ပေးသွားပါ ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက်..ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 19:590comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ... မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. ဒေါင်းသည်ဖြစ်မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ခါရောက်တိုင်း ကလစ်တစ်ချက်တော့ နှိပ်ပေးသွားပါ ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက်..ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 19:510comments
Malaysia Home make
Posted by Nya Min Thar at 19:330comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. ဒေါင်းသည်ဖြစ်မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ခါရောက်တိုင်း ကလစ်တစ်ချက်တော့ နှိပ်ပေးသွားပါ ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက်..ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 19:290comments
Posted by Nya Min Thar at 19:180comments
Posted by Nya Min Thar at 19:110comments
Posted by Nya Min Thar at 18:480comments
Posted by Nya Min Thar at 18:440comments
ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. ဒေါင်းသည်ဖြစ်မဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ခါရောက်တိုင်း ကလစ်တစ်ချက်တော့ နှိပ်ပေးသွားပါ ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက်.. ညမင်းသား
Posted by Nya Min Thar at 12:163comments
ချောင်းသာမှာ လိုးတာလို့ပြောပြီး မေးထဲရောက်လာတာပါ
Saturday, 26 October 2013 |0comments
ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ.. မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျား ဒေါင်းသည်ဖြစ်စေ မဒေါင်းလည်းရပါတယ်.. ကလစ် တစ်ချက်လောက်တော့ နှိပ်သွားပေးပါဗျာ.. Skip Ad ကိုနှိပ်ပြီးသည်အထိပေါ့
Posted by Nya Min Thar at 11:410comments
Posted by Nya Min Thar at 14:280comments
Posted by Nya Min Thar at 14:202comments
Posted by Nya Min Thar at 14:190comments
မလေးမလား။ အင်ဒိုလားတော့ မသိတော့ဘူး
Posted by Nya Min Thar at 14:140comments
Posted by Nya Min Thar at 02:530comments
လဲ့လဲ့မြင့်တဲ့ မေးထဲကိုပို့ထားတာပါ. ပို့ထားတာကတော့ကြာပါပြီ အခုမှကြည့်မိလို့
Friday, 18 October 2013 | 1comments
လဲ့လဲ့မြင့်...လိပ်စာ..အမှတ်(၆၀၀) ကွက်သစ်ရပ်ကွက်.မြို့သစ်ကြီး မြစ်ကြီးနား၊ဖုန်း(ကိုယ်ပိုင်)၀၉၄၀၀၀၄၂၈၄၅၊ အလုပ်အကိုင်..ရွှေလမင်း အမှတ်(၁၅၀) အ.ထ.က(၃) အရှေ့ကျောင်းလမ်း မြို့သစ့်ရပ်ကွက်.မြစ်ကြီးနား၊ ဖုန်း..၀၇၄.၂၁၁၉၂၊ဆက်သွယ်ညှိနိုင်းနိုင်ပါသည်၊ဖုန်းဖြင့်လည်း sex အကြောင်းများပြောပေးပါသည်၊
Posted by Nya Min Thar at 23:28 1 comments
Posted by Nya Min Thar at 22:140comments
Posted by Nya Min Thar at 22:100comments
ကျွန်တော် အလုပ်တွေတော်တော် ရှုပ်နေတာနဲ့ Video တွေမတင်နိုင်တာကြာပါပြီ. . ဒီဘလော့ပေါ်ကို Video တွေတင်ပေးနိုင်မည့်သူများရှိရင် nyamintharkoko2010@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။ Admin ခန့်ပေးထားပါ့မယ်။ ဒီဘလော့လေးဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်ဖို့ အကူအညီလိုအပ်နေလို့ပါ။
Posted by Nya Min Thar at 22:060comments
စောက်ဖုတ်လေးတော့ ကွဲပါပြီ.. ငယ်သံပါအောင်အော်နေရှာတယ်
Posted by Nya Min Thar at 21:590comments
Posted by Nya Min Thar at 21:58 1 comments
Posted by Nya Min Thar at 21:340comments
လူအသက်ကြီးပေမဲ့လီးမပျက်စီးသေးပါ။ သန်တုန်းမြန်တုန်း လိုးနိုင်တုန်းပါ :P
Posted by Nya Min Thar at 21:32 1 comments
Posted by Nya Min Thar at 21:260comments
Posted by Nya Min Thar at 21:182comments
ခိုးစားမှ အရသာရှိသတဲ့ ဂျပန်ဇတ်လမ်း
ဒေါင်းချင်သူများ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒေါင်းပါ Click Here To Download
စောက်ဖုတ်ကတော့ အလန်းပဲဗျ လိုးချင်စရာပဲ
အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်.... Download Here
ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတဲ့အတွက်အမြည်းလေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အပြည့်ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒေါင်းကြပါခင်ဗျာ ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ... Dow...
ရုပ်ပြစာအုပ်ကလေးပါ .. ဒေါင်းပြီးတော့ ဖတ်လိုက်ပါ ကောင်းတယ် Download From UserCloud Click Download From pCloud Click
အားပေးလိုက်ပါအုံး...အော်ချက်ကတော့ 9+ ပါပဲ။
အားပေးကြည့်လိုက်ပါအုံး... Click Here To Download...
Copyright © 2011. ညမင်းသားကိုကို - All Rights Reserved